Maxaa keena in kacsigu ku yaraado dumarka Xiliyada uurka lagu guda jiro..?? - iftineducation.com
Maxaa keena in kacsigu ku yaraado dumarka Xiliyada uurka lagu guda jiro..??
iftineducation.com – Ma jiraan labo haween ah oo dareema si isku mid ah waqtiga uurka. Haweenka badankoodu, uureysigu ma beddelo xiiseyntooda galmada.
Haweenka qaarkoodna, xakamaynta dhalmadu waxay u ahayd carqalad, isla markaana waxaa laga yaabaa inuu uureysigu u yahay waqti xorriyad. Waqtiyo dhowr ah, haweenka qaarkood ayaa laga yaabaa iney dareemaan iney “luminayaan qaabkooda iyo sida ay u eg yihiin” waqtiga uurka.
Qaabkaan ayaa biyaha looga keenaa adigoo labada far ka galinaayo siilka si
inteysan galmada bilaban saan ugu siigey naagtaada